कोरोना कहर : संक्रमित एक करोड र मृतक पाँच लाख नजिक, महामारीको दोस्रो लहर आउने खतरा — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > कोरोना कहर : संक्रमित एक करोड र मृतक पाँच लाख नजिक, महामारीको दोस्रो लहर आउने खतरा
कोरोना कहर : संक्रमित एक करोड र मृतक पाँच लाख नजिक, महामारीको दोस्रो लहर आउने खतरा
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या एक करोड नजिक पुगेको छ । अहिलेकै वृद्धि दर अनुसार अबको २४ घन्टाभित्र संक्रमित संख्या एक करोड नाघ्नेछ ।
वल्डोमिटरका अनुसार हाल संक्रमित संख्या ९८ लाख ९६ हजार ९ सय ४७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा झण्डै दुई लाख संक्रमित बढेका छन् । कुल मृतकको संख्या ४ लाख ९६ हजार पुगेको छ । यही गतिमा मृत्यु दर बढेमा अबको २४ घन्टामा ५ लाख नाघ्नेछ ।
सबैभन्दा बढी अमेरिकामा साँढे २५ लाख संक्रमितमध्ये एक लाख २७ हजारको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा एक लाख २८ हजार संक्रमितमध्ये ५६ हजारको मृत्यु भएको छ । रुसमा ६ लाख २० हजार संक्रमितमध्ये ८ लाख ७ सयको मृत्यु भइसकेको छ ।
नेपालमा संक्रमित संख्या ११ हजार नाघेको छ । २७ जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । यसैगरी, कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर फैलने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले एक शताब्दी अघि स्पेनिश फ्लुमा जस्तै करोडभन्दा बढी मानिसको ज्यान जानसक्ने खतरा औल्याएको छ । शुक्रबार डब्लुएचओले औपचारिक रुपमा यस्तो खतरा औल्याएको हो ।
डब्लुएचओका सहायक महानिर्देशक डा. रानिरी गुयराले कोभिड १९ को महामारीलाई स्पेनिस फ्लुसँग तुलना गरेका हुन् । उनले स्पेनिस फ्लुको दोस्रो लहरबाट ५ करोड मानिसको ज्यान गएको स्मरण गराउँदै कोभिड १९ बाट पनि त्यस्तै खतरा आउनसक्ने औल्याए ।
स्पेनिस फ्लु गर्मी मौसममा मथ्थर जस्तै भएपनि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा डरलाग्दो तरिकाले फैलिएको उल्लेख गरे । युरोपका देशहरुले लकडाउन खुकुलो गर्दै यात्रा अनुमति पनि दिन थालेपछि गुयराको भनाई सार्वजनिक भएको हो ।
स्मरणीय रहोस् स्पेनिस फ्लुबाट ५ करोडभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । पहिलो लहरमा केही लाख मानिसको ज्यान गएकोमा दोस्रो लहरमा करोडौंको ज्यान गएको थियो ।
२०७७ असार १३ गते ०८:३९ मा प्रकाशित
कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै, लक्षण पनि थपिँदै : यस्ता छन् नयाँ लक्षणहरु !
काम गर्न असफल भएको महशुस हुनासाथ पद त्याग्छु : पर्यटनमन्त्री भट्टराई
फागुन २४ देखि २८ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा
तनहुँमा बिहान र बेलुकी ‘लकडाउन’ खुल्ने !
आजदेखि नयाँ नोट साट्न सुरु
नयाँ नेपालको शान, गमलामा धान …